Tantara momba ny lalamby Sipra sy Map | RayHaber | raillynews
[25 / 05 / 2020] Mitombo ny tahan'ny hetra amin'ny fifanakalozana vahiny sy ny fifanakalozana volamena avy any 2 isaky ny an'arivony ka hatramin'ny 1 Percent! Handoa hetra $ 100 miaraka amin'ny $ 1	ANKAPOBENY
[23 / 05 / 2020] Malalaka ve ny làlana sy ny lalamby?	34 Istanbul
[23 / 05 / 2020] Hasaina hampiasaina amin'ny lalambe mandritra ny andro firavoravoana	ANKAPOBENY
[23 / 05 / 2020] Rahoviana no hisokatra ny moske? Rahoviana no hanomboka ny fiankohofana amin'ny Moske sy Masjids?	Ankara 06
HomeIZAO TONTOLO IZAOAZIA90 TRNCTantara momba ny lalamby an-tsambo
16 / 05 / 2020 90 TRNC, AZIA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, PHOTOS, ANKAPOBENY
tantaran'ny lalamby cibris
Orinasa misy lalamby miasa any Chypre eo anelanelan'ny 1905-1951 amin'ny anaran'ilay orinasa Railway Railway. Niasa teo amin'ny tsipika teo anelanelan'i Evrihu ao amin'ny Lefke sy ny tanànan'i Famagusta izy. Nandritra ny taonany mavitrika dia nitondra fitaterana 3.199.934 taonina sy mpandeha 7.348.643 XNUMX XNUMX.
Ny fananganana azy dia nanomboka tamin'ny taona 1904, ary taorian'ny fanokafana ny fizarana Nicosia-Famagusta, ny dingana voalohany amin'ny andalana, dia nataon'ny Komitin'ny Lehibe anglisy Sir Charles Anthony King-Harman tamin'ny 21 Oktobra 1905 avy tany Famagusta. Tamin'io taona io ihany dia nanomboka ny asan'ny tsipika Nicosia-Omorfo ary vita io tao anatin'ny roa taona. Farany, ny asan'ny tsipika Omorfo-Evrihu dia nanomboka tamin'ny 1913, ary vita ny tsipika tamin'ny 1915 tamin'ny fanombohan'ity fizarana ity.
Ny tanjon'ny fananganana dia ny fitaterana legioma, voankazo novokarina nanodidina ny tanànan'i Omorfo (Güzelyurt) ary ny molaly varahina nalaina avy tao amin'ny tanàna Lefke nankany amin'ny seranan'i Larnaca. Noho io tanjona io, ny tsipika Omorfo-Larnaca no nodinihina voalohany. Saingy taty aoriana, nisy ny olona malaza tao Larnaca nilaza fa hanimba ny varotra amin'ny rameva ny rameva ary hijaly amin'izany ny rameva, ary manohitra ity andalana ity, ny fijanonana farany amin'ny tsipika dia nifindra avy any Larnaca mankany Famagusta.
Ny famatsiam-bola amidy miisa 127,468 (Pound) dia nomen'ny trosa ambanin'ny lalàna fitrandrahana Colonial tamin'ny 1899, ny andalana dia natsangan'ny fifanarahana subcontractor.
Fampahalalana an-dàlamby lalamby
Ny halavan'ny andalana dia 76mil (122 km), ny halavan'ny lalamby dia 2 tongotra 6 santimetatra (76,2 cm). Nisy mpandeha an-tongotra tany amin'ny gara lehibe efatra. Ny haavon'ilay andalana dia 100 tamin'ny 1 teo anelanelan'i Famagusta Nicosia ary 60 tamin'ny 1 anelanelan'i Nicosia Omorfo.
Fiara 30 teo ho eo no narahina zotra, indrindra i Evrihu, Omorfo (Güzelyurt), Nicosia ary Famagusta. Ny anaran'ny garano dia nosoratana tamin'ny teny tiorka (tiorka Ottoman), grika ary anglisy. Ny sasany tamin'ireo fitobiana ireo dia nampiasaina ihany koa ho toy ny masoivoho paositra sy telegraph. Nandeha teo anelanelan'i Nicosia sy Famagusta ny fiaran-dalamby tao anatin'ny 30 ora teo, tokony ho 48 mph (eo ho eo 2km / ora). Ny ora fitsangatsanganana ny andalana manontolo dia 4 ora.
Toerana sy tsy fahitana
Kaimakli - (creamy)
Ity fampahalalana ity dia momba ny tsipika tamin'ny taona 1912 ary hatramin'ny nanokafana ny tsipika avy any Omorfo mankany EVRYCHOU dia tsy ao anatin'ity lisitra ity ny fampahalalana an-tariby lavidavitra an'io.
Famaranana ny lalamby lalamby sy fotoana farany
Fanapahan-kevitra no noraisin'ny mpitantana fanjanahana anglisy mba hamaranana ny lalamby vokatry ny fanatsarana ny fitaterana an-tanety, mampihena ny fangatahana ny fiaran-dalamby sy ny antony ara-toekarena. Tamin'ity fanapahan-kevitra noraisina tamin'ny 1951 ity dia niafara tamin'ny fitsangatsanganana ny gara 48 taona any Chypra. Ny sidina farany nataony dia nifarana tao amin'ny Station Famagusta tamin'ny 31 desambra 1951 tamin'ny 14:57 niaraka tamin'ny dia avy tany Nicosia nankany Famagusta.
Mpiasa 200 sy mpiasam-panjakana am-perinasa miasa amina orinasa no nifindra tany amin'ny andrim-panjakana tsy ofisialy.
Ny lalamby lalamby androany
Rehefa nijanona ny lalamby dia namidy ny lalamby rehetra sy lokomototra teo amin'ny tsipika ny lalamby britanika ary namidy amina orinasa iray antsoina hoe Meyer Newman & Co amin'ny £ 65.626. Noho izany antony izany, tsy misy faritra mijanona amin'ny làlan'ny andalana.
Güzelyurt, Nicosia ary Famagusta tranobe misy ny sisin-tanin'i Sipra Avaratra dia mbola mijanona sy misokatra amin'ny serivisy fanompoana any amin'ny faritra samihafa. Ny Station Station EVRYCHOU, etsy ankilany, dia eo amin'ny faritany eo ambany fifehezan'i Sipra ary miasa ho an'ny tanjona hafa. Raha ny roa amin'ireo 12 no vakin'ilay tropy; Ny lokomototra no 1 dia ao amin'ny zaridainan'ny Rejistra momba ny Tany Famagusta ary ny lokometran'ny no 2 dia ao amin'ny Güzelyurt Festival Park.
Ny Station Station EVRYCHOU, izay manana toeram-pitrandrahana varahina dia mbola azo ampiasaina na dia ankehitriny aza.
Map a Railway Map
Tantara Railway tsy fantatra
Valiny amin'ny tsikera avo lamasinina avy any Chypre
Tranon'ny tetikasa EU ho fanohanana an'i Sipra
Anisan'ny tetikasa hatao any Sipra dia misy tetikasa tram-barotra
Ny mpamily fiofana notohanan'ny Metro Istanbul dia nahazo mari-pankasitrahana
Ny metro vaovao Metro Istanbul dia nahazo mari-pankasitrahana
Ny rakitra DHMI ho an'ny 2015-2016 taona navotsotra
Modely ho an'i Sipra ny fitaterana an'i Kayseri
Làlan'ny mpampiofana avy any Ekrem İmamoğlu
Kaart von Ankaray | Sarintanin'i Ankaray Line sy Ankaray
Momba ny ESHOT, ny Map ihany ny ESHOT ary ny Map Map an'ny Linya momba ny Night Night
Fampahalalana momba ny tantaran'ny Baghdad Railway Line Project
TCDD Faritra faha-3 Cumaovası - Torbalı - Selçuk Railway Project Superstructure…
Railway mpitondra lalamby
Sivanin'ny Fanjakana Railway
Lalamby lalamby Nicosia-Omorfo
Notaterina ho an'ny fanamarinana ny tatitra momba ny famokarana fiara automatique an-trano
Minisitry ny Karaismailoğlu hanangana ny fampielezankevitra YHT Voalohany amin'ny Era Vaovao
Fandraisana feno ao amin'ny Federasiona Iraisam-pirenena Avaratra (FAI)
Androany amin'ny tantara: 27 May 1944 Diyarbakir-Fitaterana ny maha-olombelona
Andro farany tamin'ny hetra andiany trano tamin'ny 1 jona
Fanohanana solika ho an'ny fiara fitateram-bahoaka tsy miankina
Miatrika ny Tender any amin'ny Hopitaly Metro Hospital Bursa City
Ohatrinona ny vidin'ny fialan-tsasatra amin'ny mariazy miaraka amin'ny pass guaranteed?
Fifandraisana volamena avy any Metropolitan mankany Izmir Fifamoivoizana
Natsangana ny fantsom-pifandraisana ara-tsosialy any Istanbul
Mitombo ny mpitatitra sy ny fiara amin'ny İzmir
Fanavaozana ny tsipika Metro İmamoğlu
75 tapitrisa Mill Credit Euro ho an'ny Metro Metro Üçkuyular Metro ao Izmir
Fiaramanidina fiaramanidina voalohany an'ny Turkey ND-36 sy Nuri Demirağ
Fanamarihana momba ny fikarakarana: Fitaterana an-dalamby
Fampandrenesana Tender: Fanamboarana serivisy fanamboarana ny fanamboarana trano fandatsian-jiro Ankaray Plant Jurnal
Ny filankevitry ny fikarohana ara-tsiansa sy teknolojia any Tiorkia (TUBITAK) ao anatin'ny olona 15 dia hiasa. Araka ny fanambarana tao amin'ny Gazety ofisialy, ny asan'ny Space Technologies Research Institute (UZAY) [More ...]
TÜBİTAK Bilgem Handray mpiasa 10
Samsun Metropolitan Municipality dia hanome fanampiana solika amin'ny tsy miankina Public Bus, izay mahazo 50 isan-jaton'ny fahafahany noho ny coronavirus. Fiadiana ny areti-mifindra vaovao coronavirus (Kovid-19) misy ny tsimok'aretina eo amin'ny minisiteran'ny atitany [More ...]
Ny minisitra Karaismailoğlu dia manadihady ao amin'ny tranokalan'ny Amasya Ring Road Amasya
Olana famokarana ao amin'ny orinasa fametahana Optical ASELSAN
Navoaka tao amin'ny orinasa Fitaovana afovoany MKE Gazi Firenena ny tsipika famokarana an-trano sy nasionaly
Fanombohana fitsapana dia nanomboka tamin'ny tsipika vaovao tratry ny Eskişehir
Ny mpiady F35 dia teo amin'ny fandaharam-potoana tato ho ato. Ny mpiady F35 izay tiantsika hividy avy any Etazonia dia nivadika krizy teo anelanelan'ny firenena roa. Ny antony dia ny S-400, izay hovidiana avy any Rosia. [More ...]
Dingana Kovid-19 ary aorian'ny taorian'ny indostrian'ny fiarovan-tena eto amin'izao tontolo izao sy Torkia
Tao amin'ny fanambarana nataon'ilay Mpikambana BMC Board Taha Yasin Öztürk, naseho ny fanontana farany an'ny BMC Tulga. Hoy i Taha Yasin Öztürk: “Amin'ity dingana sarotra ity dia ao anaty ny filaminana anatiny isika [More ...]
Minisitra Varank: 'miasa daholo ny orinasa lozisialy rehetra'
Fotoam-panendrena an-tserasera hifanohitra amin'ny Kovid-19 amin'ny fakan-kevitra amin'ny fiara
TCDD Bozkurt - Tetikasa Dinar Railway Dinar Daty fihenan'ny asa fanamboarana ny lalana…
Famantaranandro manan-tantara avy amin'ny Trabzon-Erzincan Railway Platform
TCDD Faritra 1 Çorlu - Martaş Port New Railway Line sy kapiteny Demir…
TCDD Ankara - Sivas Railway Project Kırıkkale - Yerköy Section yapım
Tetikasa TCDD Menemen Manisa Double Line Railway Fototra fanamboarana fotodrafitrasa…